အင်္ဂတေ - နန်ကျောက်မီးသွေးသုတေသန Keming စက်မှု Co. , Ltd
အိမ်သူအိမ်သားသေးချိတ်ဆက်မပါလျှင်ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါကန်ထရိုက်တာပြီးသား Gypsum လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုအင်္ဂတေအဖြစ်ရေမဆိုပြင်ပထောက်ပံ့ရေးအပေါငျးတို့သအိတ်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါအင်္ဂတေအမှုထမ်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုရောက်စေခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ပုတီးထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါအင်္ဂတေအများအားဖြင့်အိမ်၏အတွင်းပိုင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှပြူး (ပြင်ပ) ထောင့်ပေါ်ကိုပထမဦးဆုံးအဓိကသို့မဟုတ်မှို Cornerbead ရပါမည်။ စောင့်ရှောက်မှုကဤထရံကိုကြည့်ဖြောင့်ကိုအရာအားလုံးထက်ထက်မျက်စိတစ်ကျွမ်းကျင်မှုပိုမိုဖြစ်ပါတယ်သေချာအောင်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
"ပုတီးစေ့" အမြားစတိုင်များလာ; အဓိကအားဖြင့်ပူးတွဲဝါယာကြိုးကွက်ကနေလက်သည်းနှင့်အတူပေါ် tacked ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးလေးလံသတ္တုအဆင့်အထိ။ ပလပ်စတစ်အမျိုးပေါင်းလည်းမတည်ရှိ။
အဆိုပါပုတီးကိုတိုင်းနှင့်အရွယ်အစားဖြတ်ရမည်, စောင့်ရှောက်မှုကြောင့်တင်နိုင်သို့မဟုတ်အတိုင်ဖို့မယူတတ်၏။ တစ်ဦးထက်ပိုထောင့်နှင့်တွေ့ဆုံသောနေရာများတွင်; ယင်းပုတီးရဲ့ကြီးစွန်းတစ်ထောင့်မှာဖြတ်နေကြသည်နှင့်2သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအကြံပေးချက်များအိုင်အိုဒင်းအဖြစ်အတူတူနီးစပ်အဖြစ်ထားရှိကြ၏ ထိပေမယ့်ထပ်မဟုတျ။ အဆိုပါပုတီးလုံးဝအင်္ဂတေအဖြစ်ထိုအုတ်ရိုး၏ကျန်များနှင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်အင်္ဂတေကိုလည်းမြဲမြံစွာကိုင်ထားစေရန်ကူညီပေးသည်ဖြစ်ပါတယ်။ အချောထုတ်ကုန်မြို့ရိုးအခြယ်သောအခါဖုံးလွှမ်းရရှိသည့်ထောင့်များ၏ protrusion မှာသာသေးငယ်တဲ့ထိတွေ့သတ္တုချွတ်ထွက်ခွာမည်။ ဒါကစင်ကြယ်သောဖြောင့်ကြည့်ထောင့်အရွက်။
တစ်ဦး rounded သို့မဟုတ် bullnosed ထောင့်ဖွဲ့စည်း၏အဟောင်းတွေအိမ်များတွင်တွေ့မြင်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတခု quirked သစ်သားန်ထမ်းပုတီးကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါဝန်ထမ်းပုတီး, ခန့် 1/3 နဲ့ 1 လက်မ Dowel နောက်ကျောကိုချွတ်ရိတ်, site ပေါ်တွင်ဆက်ပေးသူအားဖြင့်ပြင်ပထောင့်အပေါ်ထားအုတ် / ပိတ်ပင်တားဆီးမှုချုပ်ရိုးသို့သတ်မှတ်ထားသစ်သားပလပ်ပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်သစ်သားဘောင်မှဆွဲထားကြ၏ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂတေဝန်ထမ်းများစေ့အထိကို run ထို့နောက်အင်္ဂတေအဆိုပါပုတီးနှင့်တွေ့ဆုံဘယ်မှာအားနည်းအမွေးအစွန်းကိုရှောင်ရှားဖို့စေ့သို့မဟုတ် "quirked" ကိုဒေသအလိုက်ပြန်ဖြတ်သည်။
ဗိသုကာတစ်ဦး quirk သေးငယ်တဲ့ '' V ကို '' shaped ရုပ်သံလိုင်းသီးခြားထားကာခုံး rounded တန်ဆာမှကယ်ဆယ်ရေးပေးရအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါအင်္ဂတေထောင့်မှာဖန်တီးပေးဖို့, ကျောထောက်နောက်ခံကုတ်အင်္ကျီ (အညို) ကဝန်ထမ်းများစေ့အထိအသစ်မွမ်းမံနေသည်, ထို quirk အချောအရွယ်အစားထက်အနည်းငယ်ပိုကြီးတဲ့အတွက်ကျောထောက်နောက်ခံအင်္ကျီထဲသို့ဖြတ်သည်။ ထိပ်သုန်မှုန်ကုတ်အင်္ကျီလျှောက်ထားသောအခါပြန်စေ့အပြည့်အဝတစ်ဖြောင့်အစွန်းကို အသုံးပြု. , ထို့နောက်အတွက် skimmed နှင့်နေသည်, ထို quirk ပုံမှန်အားဖြင့်ပုတီးသို့အနေနဲ့အနီးစပ်ဆုံး 45 ဒီဂရီထောင့်တွင်, အချောအတိမ်အနက်ကိုမှ re-ဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ quirk ဝန်ထမ်းများပုတီးနှင့်အင်္ဂတေအကြားဖွဲ့စည်းရန်လိမ့်မည်ဟုနောက်ဆုံးအသေးစားအက်ကွဲလွှဲမည်။
tools တွေကို set up
အဆိုပါအင်္ဂတေသည်ရေနှင့် 5-ဂါလံပုံး partway ဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒီပုံးထဲကနေသူကအမျိုးမျိုးသော tools များသို့မိမိအ trowel သို့မဟုတ် trowels နှင့်နေရာများဆွဲထားတဲ့။
ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးအင်္ဂတေ "ပေါ်တွင်တင်သော" ဘို့တ trowel (ထိုမြို့ရိုးကိုပေါ်သို့ရွှံ့အားမရ၏လုပ်ငန်းစဉ်) ရှိပါတယ်။
တချို့ကပြီးနောက် "texture" ၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုရမည့်အထဲတွင်တစ်လျောက်ပတ်သောကွေး (ငှက်ပျောကွေး) ရှိကွောငျးအဟောင်း trowel စောင့်ရှောက်; အိမ်ရှင်များကအဘို့ကိုခေါ်ပါ။ တစ်ဦးက Lay-အပေါ် trowel ဒီလည်းပြားချပ်ချပ်ဖြစ်လေ့နှင့်ရေကြောင့်ဖြစ်ပွားသည့်လေဟာနယ်မြို့ရိုးကကပ်နိုင်ပြီး, ကဖြတ်ဖို့သူ့ကိုအတင်းအကျပ်နှင့်အရှင်သူဧရိယာ rework ဖို့ရှိပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့တဦးတည်းသူက "ကြိတ်" အတွက်အသုံးပြုပါလိမ့်မယ်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က trowel "မသေးကြိုးပဲ့-In" ရှိစေခြင်းငှါ, အဆိုပါအင်္ဂတေနီးပါးခိုင်မာနေသည်နှင့်သူရတဲ့အရာတွေအဖြူရောင်အင်္ဂတေ၏ယူနီဖောင်းစာရွက်ကဲ့သို့မြို့ရိုးကိုကြည့်လုပ်မဆိုအသေး dips (ကြောင်ရင်ဆိုင်နေရ) တွင်မဆိုပြန်တယ်သို့မဟုတ်အဆာကိုထုတ်ချောမွေ့အခါဒီဖြစ်ပါသည်။
အများစုမှာအင်္ဂတေသူတို့သုံးတဲ့ trowel ၏အရွယ်အစားအဘို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် preference ကိုရှိသည်။ အချို့သောရှည်လျား 20 လက်မအဖြစ်အကြီးစားအဖြစ် trowels ကိုင်စွဲပေမယ့်စံတစ်ဦး 16 "× 5" ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံကနေဦးစားပေးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု Marshalltown သံမဏိဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တစ် brassy တောက်ပတစ်ဦးရော်ဘာလက်ကိုင်ရှိသည်နှင့်အခြားသူများကိုပိုပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ပါတယ်ပေမယ့်အတော်လေးအချိန်ကြာမြင့်စွာကြာနှင့် pitting "ကပေးနိုငျသောပုံမှန်ခိုးယူ trowel ကြိုက်တတ်တဲ့စဉ်မတော်တဆရေနေ့ချင်းညချင်း၌ကျန်ကြွင်းလျှင်ငျးသို့မဟုတ်သံချေးမည်မဟုတ် ပြီး "(ပုအင်္ဂတေ setting ဖြစ်ပါတယ်အခါနောက်ဆုံး pass)" လာသောအခါကူညီပေးသည်ကြောင်း "ကိုကိုက်။
အဆိုပါရေပုံးသို့လည်း (သဟဇာတအခန်းစောင့်ရှောက်ရန်တဦးတည်းအကောင်းငှက်အများအပြားရှယ်ယာသော်လည်း) ထောင့်ဖွဲ့စည်းဘို့အုတ်ရိုးနားမှာပေါ်သို့ရေမှာသုတျဖို့နဲ့သူ့ tools တွေကိုရှင်းလင်းဖို့အသုံးပြုကြီးမားတဲ့ဖြီး, ထောင့်ချောမွေ့များအတွက်ဆေးသုတ်ဖြီးနှင့်ထောင့်ငှက်တတ်၏။
ဤရွေ့ကား tool ကိုပုံးပထမဦးဆုံးသတ်မှတ်ထားဖို့အင်္ဂတေစတင်အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ခံကြောင်းရိုးပိုမိုနီးကပ်စွာပြောင်းရွှေ့နေကြသည်အဖြစ်ထို့နောက်ရောနှောစားပွဲအနီးစောင့်ရှောက်နေကြသည်။ အဆိုပါအင်္ဂတေ (set ကို) ခိုင်မာမှစတင်သည်တစ်ချိန်ကဒါမျှမျှတတလျှင်မြန်စွာပြုကြလိမ့်မည်နှင့်အင်္ဂတေချောမွေ့မြို့ရိုးအအရအမှား၏သေးငယ်တဲ့အနားသတ်ထားပါတယ်အဖြစ်အချိန်ကဒီမှာအကြီးအကျယ်အချက်ဖြစ်လာသည်။
အဆိုပါရောစပ်စားပွဲပေါ်မှာပေါ်သို့အင်္ဂတေများသောအားဖြင့်သူ၏ "Hawk" သတ်မှတ်ဒီတော့သူကဖမ်းပြီးရန်နှင့်ထိုသို့ပယ်အမှိုက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်နေပါသည်အခါနေရာလေးကိုဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါအင်္ဂတေအတွက်မဆိုအပျက်အစီးများအဓိကစိတ်အညစ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အင်္ဂတေပုံမှန်အားဖြင့်ထိပ်ဆုံးနှင့်အောက်ဆုံးသို့အခန်း (အထူးသဖြင့်ကြီးမားသောသို့မဟုတ်မြင့်မားသော ceilinged မြို့ရိုးကို) ဝေယူပါလိမ့်မယ်။ ထိပ်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေတအကြောင်းကိုဝမ်းအမြင့်မှမျက်နှာကျက်ရဲ့အစွန်းကနေလုပျကာ 8-ခြေလျင် (2.4 မီတာ) မျက်နှာကြက်တစ်နို့သေတ္တာကိုချွတ်အလုပ်လုပ်, ဒါမှမဟုတ် 12-ခြေလျင်မြင့်ခန်းများအတွက်ခြေတံရှည်ကိုချွတ်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘုရားကျောင်းမှာမျက်နှာကျက်သို့မဟုတ်အလွန်မြင့်မားရိုးကိုအဘို့, ဇာတ်စင်ကို set up နှင့်တဦးတည်းနောက်ထပ်အောက်ကအခြားသူများ topside အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
သူတို့တစ်တွေအလုပ်ပြီးအောင်မတိုင်မီကို clean up
ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါအလုပ်သမားနှင့်အတူပြုသောအမှု။ ကြမ်းပြင်, နံရံများသို့မဟုတ်ထောင့်စေ့အနားအပေါ် left အဘယ်သူမျှမအင်္ဂတေ globs ။ (သူတို့ကခြယ်လျှင်ပေါ်လာနှင့်အခင်းနှင့်လျနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ပါလိမ့်မယ်) ။ Remove သို့မဟုတ်သေသပ်စွာအားလုံးသီးနှံများကိုပုံ အမှိုက်။
အားလုံးခန်းနှင့်နံရံနံရံသို့တိုးမြှင့်အခြားသူများထံမှစေသောခဲ့ကြခြင်းအလိုငှါကွဲအက်ခြင်းနှင့်ချိုသို့မဟုတ်ခြစ်များအတွက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်နေကြသည်။ သူတို့ကအစမပါလာပြီး splash အင်္ဂတေသို့မဟုတ်ရေထဲကနေမြို့ရိုးပေါ်မှာကျန်ကြွင်းသေချာအောင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်နေကြသည်။ အားလုံးအခန်းပေါင်းအဆိုပါလျှပ်စစ်ခြေစွပ်တပ်ဆင်နိုင်သည်နှင့်မျှမ tools တွေကိုကျန်ရစ်ကြသည်သေချာစေရန်ဒီတော့အားလုံးအင်္ဂတေအဆိုပါဆိုင်များတွင်ထဲကခေါက်နေသည်သေချာအောင် check လုပ်ထားကြပါတယ်။ ဤသည်၌လာနှင့်၎င်းတို့၏ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ဖို့ပန်းချီဆရာများနှင့်ပန်းဝင်ဘို့အဆင်သင့်နံရံထွက်ခွာမည်။
အဆိုပါနေအိမ်ပိုင်ရှင်နှင့်အင်္ဂတေရဲ့သူဌေးများသောအားဖြင့်သူတို့ကအိမျတျော၌သုံးပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့စတိုင်များကိုရှေ့မဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်နံရံများချောမွေ့ဖြစ်ကြပြီးတခါတရံ ceilings ။ အများအားဖြင့်တစ်အိမ်ရှင်ကအများကြီးလွယ်ကူသည်အတိုင်းမျက်နှာကျက်ပိုမြန်,a"ကို texture" technique ကိုအသုံးပွုရရှိသည်ဖို့ရွေးချယ်နှင့်အရှင်ချောမွေ့မျက်နှာကျက်သည်ထက်စျေးနှုန်းချိုသာပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအင်္ဂတေအလုပ်ကိုစတင်ရှေ့တော်၌ထိုကန်ထရိုက်တာသို့မဟုတ်အိမ်ရှင်မှဖုံးလွှမ်းခံရဖို့အသုံးပြုခံရဖို့နည်းစနစ်အပေါ်အခြေခံပြီးစျေးနှုန်းများနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ခွကေိုကိုးကား။ အဆိုပါဘုတ်အဖွဲ့ပေကြိုးကွင်းဖြင့်ရရှိသောသို့မဟုတ်ရှည်လျား '' မှ 12 '' 8 တစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းစံဝင်တော်မူသော wallboards ရေတွက်ခြင်းအားဖြင့်ဦးခေါင်းကန်ထရိုက်များကခန့်မှန်းထားသည်။ ထို့နောက်သူသည် soffits နှင့်ဘုရားကျောင်းမှာမျက်နှာကျက်အဘို့အပိုကုန်ကျစရိတ်အတွက်ထပ်ပြောသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်မျက်နှာကျက်နံရံမှီ, ကပထမဦးဆုံးအပြုချောမွေ့ခံရဖို့ပါလျှင်။ က textured ခံရဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုပါကမြို့ရိုးအပြီးပြုမိသည်။
ဒီအကြောင်းပြချက်လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုတစ်ဦးမျက်နှာကျက်အင်္ဂတေပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ခံရသောအခါမြို့ရိုးပေါ်သို့ပြုတ်ကျမှာသုတျလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ သို့သော်တစ်ဦး texture ရောနှောထားရန်စတင်လိုက်တာနဲ့ထွက်ပန်းခင်းလမ်းခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး
, အရှင်ထိုကဲ့သို့သော "ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း၏ Cream" သို့မဟုတ်သကြားအဖြစ်နှောင့်နှေးသည့် setting ကိုအချိန်ရှည်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပြီးအလွယ်တကူမြို့ရိုးကိုချွတ်ခြစ်နေသည်။
နှင့်အချိန်ကတည်းကကြီးမားသောရောနှော ceilings, ဒါမှမဟုတ် back-to-ကျောရောသမမွှေများလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်အပေါင်းတို့နှင့်မျက်နှာကျက်တစ်ချိန်တည်းမှာဖုံးလွှမ်းအရောင်အဆင်းပေါ်မှာအချက်၏တားမြစ်အဖြစ်မဟုတ်ပါဘူး။
အခြားအကြောင်းရင်းတစ်ခုငှက်များသောအားဖြင့်ချောမွေ့မျက်နှာကြက်လုပ်နေတာပြီးနောက်ထိပ်ထောင့်မှာတစ်လျှောက်တွင်ဖွင့်ကြောင်း, ထို့နောက်ကနောက်ဆုံးမြို့ရိုးအလုပ်နေဖွငျ့ဤအစွန်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ သို့သော်တစ်ဦး textured မျက်နှာကျက်ပုံမှန်အားဖြင့်သာတစ်ဦးအလွန်စိုစွတ်သောဆေးသုတ်ဖြီးနဲ့ blended, birded ခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဤကိစ္စတွင်မြို့ရိုးအပထမဦးဆုံးအပြုနှင့်ထောင့်ငှက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
အဆိုပါအင်္ဂတေလုပ်လေ့ရှိတယ်ပထမဦးဆုံးအရာကသူကိုဖုံးလွှမ်းရန်အကြောင်းနံရံအပေါငျးတို့သကွက်-taped ချုပ်ရိုးကူးဖြစ်၏ အလွန်ပါးလွှာ swatch ၌တည်၏။ အဆိုပါ wallboard မြို့ရိုးအ၏ကျန်လုပ်နေတာအခါအင်္ဂတေပြန်ကူးသွားသောအခါနောက်ထပ် reworking လိုအပ်ပါတယ်တစ်ခုပြီးအင်တင်းခဲ့သည်ချုပ်ရိုးစွန့်ခွာမည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီချွတ်ထဲကအစိုဓာတ်ထားပါတယ်။
သူသည်မြို့ရိုးကို၏ကျန်ကာလအတွင်းကရောက်ရှိဖို့ဆန့်ရန်ရှိသည်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ထို့နောက်သူသည်မျက်နှာကျက်အနီးဧရိယာထဲမှာဖြည်; မိမိငှက်နှင့်ထောင့်ပုံစံ။ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဓာတုတုံ့ပြန်မှုဆန့်ကျင်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်သလောက်လိုအပ်သောအချိန်ကယ်တင်တော်မူ၏။
ရောနှောစားပွဲမှသည်အင်္ဂတေသည်သူ၏ trowel နဲ့သူ့ရဲ့ Hawk ၏ဗဟိုပေါ်သို့အချို့ "ရွှံ့" scoops ။ သူ၏ Off-လက်၌ Hawk နှင့်သူ၏မူလတန်းအဆိုပါအင်္ဂတေ၌သူ၏ trowel ကိုင်ထားပြီးတော့မိမိအ trowel ပေါ်ကိုအင်္ဂတေတစ်ပြူးလာပြီးအလိပ် scoops ။ ဒီအထူးသဖြင့် soupy ရောသမမွှေများနှင့်အတူသခင်အလေ့အကျင့်တစ်ခုနည်းနည်းကြာပါတယ်။
ထိုအခါမြို့ရိုးအဖို့ trowel အပြိုင်ကိုင်ထားသူတစ်ပုံစံတည်းမြို့ရိုးအပေါ်သို့အင်္ဂတေလှိမ့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်လက်ကောက်ဝတ်၏အနည်းငယ်ထောင့်မှာပါ။ တစ်ဦး squeegee ဆင်တူတဲ့ထုံးစံ၌။ သူကကြမ်းပြင်အထက်တစ်ခုလက်မအကြောင်းကိုစတင်သည်နှင့်မျက်နှာကျက်မှအထက်သို့သူ၏လမ်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကပြီးအဆင့်ကူညီပေးသည်အဖြစ်စောင့်ရှောက်မှုတတ်နိုင်သမျှယူနီဖောင်းဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
အဆိုပါအင်္ဂတေ၏ setting ကိုအချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး။ အဆိုပါအင်္ဂတေ၏အစိုဓာတ်ကိုတစ်စက္ကန့် pass လုပ်ဘုတ်အဖွဲ့အားဖြင့်ရေးဆွဲခံရဖို့စတင်သည်တစ်ချိန်က။ ဒီဆင်းခေါက်ဟုခေါ်သည်။ ကလက်ကောက်ဝတ်အရေးယူမှုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကြိတ်စက်နှင့်အတူဆေးသုတ်လျှောက်ထားတူသောအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်လိုင်းများကိုထုတ်ချောမွေ့နှင့်အင်္ဂတေအမှန်တကယ်တင်ထားရန်စတင်သည်တစ်ချိန်ကအပိုအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုမဆိုအဓိကပျက်ပြယ်အတွက်ဖြည့်စွက်ရန်။ အနည်းငယ်သာဖိအားလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နှင့် trowel မြို့ရိုးအဆီသို့ဦးတည်အတော်လေးပြားချပ်ချပ်ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
တခါတရံတခု acceleration ကတော့အင်္ဂတေကိုတင်ထားရန်စတင်လိုက်တာနဲ့မှကနဦးရောစပ်အဆင့်အနေဖြင့်အချိန်နှောင့်နှေးအလျင်အမြန်တစ်ဦးရောနှောထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။ ဤသည်ပုံမှန်အားဖြင့် setting နှောင့်နှေးသောအခါအအေးရက်ဒါမှမဟုတ်ချောင်းမြောင်း minimize လုပ်ဖို့သေးငယ်တဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ပြုနေသည်။
အဆိုပါအင်္ဂတေမြို့ရိုးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် (ဒီပထမဦးဆုံးသတ်မှတ်သောစားပွဲပေါ်မှာကဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်) တင်ထားရန်စတင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အဆိုပါအင်္ဂတေ gingerly မြို့ရိုးအပေါ်သို့ရေဖြန်း; ဒီ setting ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားရန်နှင့်တစ်ဦးစလစ်ကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးသည်။ ထို့နောက်သူသည်သူ၏ trowel ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်မကြာခဏ wetted တစ်ဦးဆန့်ကျင်ဘက်လက်၌ကျင်းပဖြီးသလိုခံစားရတယ်နှင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်အဆိုပါအင်္ဂတေအတွက် ( "catfaces" အဖြစ်လူသိများ) ဆိုသေးငယ်တဲ့ကွာဟချက်သို့ဤစလစ်အလုပ်လုပ်အဖြစ်ကြမ်းတမ်းထွက်လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်လာမည့် trowel ၏မွို့ရိုးကိုထိ On- တင်. setting အတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ကြောင်းမဆိုလေကြောင်းပူဖောင်းပြားစေ။
မြို့ရိုးအလွန်းခက်ရရှိသွားတဲ့လျှင်စလစ်မဟုတ်တော့မြို့ရိုးအနှင့်အတူထားမည်နှင့်အစားပဲခြောက်သွေ့တဲ့မည်ဖြစ်ပြီးထွက်လဲကြသကဲ့သို့မည်သည့်ကွာဟချက်အတွက်ဖြည့်စွက်ရန်နီးပါးမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကအလွန်အရေးပါအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအခိုင်မာမြို့ရိုးအထွက်လွယ်ကူချောမွေ့ဖို့ကြိုးစားနေတဦးတည်းကိုထပ်နှင့်ထပ်မံခက်ခဲမြို့ရိုးကိုကူးရမယ်အဖြစ် "ကြိတ်" ဟုခေါ်ဘာ၏လိုအပ်မှုကိုမှဦးဆောင်နှင့်မဆိုအဓိက catfaces တစ်ဦးပုံ PuTTY, ပူးတွဲဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူဖြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ရောစပ်ခြင်းဖြင့်အခုမှရပါမည် တစ်ဦးလတ်ဆတ်တဲ့ပါးလွှာသောအင်္ကျီကိုပါ။
အချောသောမြို့ရိုးရတဲ့အရာတွေနှင့်တစ်ပုံစံတည်းအပြားကိုကြည့်ခြင်းနှင့်တို့ထိရန်ချောမွေ့ဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မယ်။ ရက်အနည်းငယ်ပြီးနောက်အဖြူရောင် chalky ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့ကျော်ခြယ်သနိုင်ပါတယ်။
အိတ်မြို့ရိုးအကိုလုံးဝမသတ်မှတ်ရောနှောဟုခေါ်သည်အခါဖို့စည်သို့စွန့်ပစ်နေသောအချိန် မှစ. ။ အသုံးပြုတဲ့နည်းပညာပေါ်နှင့် acceleration သို့မဟုတ်နှောင့်နှေးဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိအမျိုးမျိုး, တစ်ဦးရောနှောပုံမှန်အားနှစျနာရီခနျ့ကွာမွငျ့ပါသညျ။
ကချောချောမွေ့မွေ့လျှင်ဒါမှမဟုတ်ရောနှောမျှော်မှန်းသည်ထက်မြန်သတ်မှတ်လျှင်နောက်ဆုံးအချိန်လေးကိုအများဆုံးလွန်မိပြီဖြစ်ကြသည်။ ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်ရောနှော (စိုထိုင်းဆသို့မဟုတ်ပူရက်ပေါင်းအင်္ဂတေမြန်သတ်မှတ်ထားဖို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်) "ရိုက်ယူခဲ့သည်" နှင့်ကြောင့်ရာသီဥတုဟောင်းများကိုကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသုံးပြီးရန်သာမန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုဆိုသည်။ အင်္ဂတေအစောပိုင်းမိုဃ်းမလင်းမှီနှင့်အတူလအတွင်းသဘာဝအလင်းရောင်အောက်မှာအဖြစ်ထိရောက်သောအရမ်းပင်ပန်းတယ်နှင့်မဖြစ်သကဲ့သို့ပုံမှန်အားဖြင့်သာသုံးလေးရောသမမွှေများနေ့ရက်ကာလ၌ပြုသောအမှုနေကြသည်။
အင်္ဂတေပတ်ပတ်လည်ပေမယ့်ထူးခြားတဲ့ပြဿနာတွေရာသီကနေတစ်ရာသီမှပျေါလာနိုငျတစ်နှစ်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ နွေရာသီမှာတော့အပူအဆိုပါအင်္ဂတေပိုမြန် set စေလေ့ရှိတယ်။ အဆိုပါအင်္ဂတေလည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပူထုတ်ပေးနှင့်အိမ်များအတော်လေးမခွဲခြားဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါအင်္ဂတေအမှုထမ်းကောင်းစွာအရုဏ်ရှေ့တော်၌ထိုအိမ်တွင်ရောက်လာရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်းလများတွင်တိုတောင်းသောရက်ပတ်လုံးအတုအလင်းရောင်၏လိုအပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အခြို့သောထောင့်မှာထိုအလငျးအိမျလ၏မျက်နှာပြင်ကဲ့သို့အပင် smoothest မြို့ရိုးကိုကြည့်စေနိုင်သည်။ ဆောင်းတွင်းလအတွင်းနောက်ထပ်အကြပ်အတည်းနွေးအဆိုပါအင်္ဂတေကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဒါပေမယ့်လည်းရေခဲအေးခဲနေသောနှင့်ထုတ်လုပ်ထံမှရောနှောအတွက်ရေကိုတားဆီးဖို့မဖွင့်, (အဝါရောင်အဆိုပါအင်္ဂတေကိုရှုတ်ချနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်မဟုတ်ရင်သူကစိတ်ထိခိုက်မထားတဲ့) ပရိုပိန်းဂျက်အပူပေးစက်ကိုသုံးဖို့လိုအပ်နေခြင်းဖြစ်သည် အဆိုပါအင်္ဂတေသတ်မှတ်ထားဖို့အချိန်ရှိပါတယ်မီ။ ဒါ့အပြင်ရေကိုရေပိုက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကညဥ့်ကိုအုပ်စိုးအေးခဲနိုင်ပြီးလုံးဝနံနက်ယံ၌ထရပ်တန့်ရမည်မထွက်ခွာမီညှစ်သည်မဟုတ်ပါ။
texture များသောအားဖြင့်ခနျး, မျက်နှာကျက်နှင့်ကားဂိုဒေါင်နံရံများအဘို့သိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ [ကိုးကားလိုအပ်]
ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးနှောင့်နှေးအေးဂျင့်ရောနှောထည့်သွင်းထားသည်။ ဤ (အဆိုပါအင်္ဂတေရဲ့ဗန်းစကားအတွက်သို့မဟုတ် "Dope") ပုံမှန်အားပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း၏ Cream ဖြစ်ပါတယ်ပမာဏကဆက်ပြောသည်နှင့်အတူစောင့်ရှောက်မှုယူရမည်ဖြစ်သည်။ အလွန်အကျွံနှင့်ရောနှောမှာအားလုံးသတ်မှတ်ထားဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ သို့သျောလညျးကိုအသုံးပြုပမာဏမကြာခဏခန့်မှန်းလျက်ရှိ၏ တဦးတည်းတစ်စာရွက်မှဆား၏ dash ထပ်ပြောသည်အများကြီးပြောင်းသွားတယ်။ သင်ရောနှော၏အရွယ်အစားပေါ်မူတည်နှောင့်နှေးနေတဲ့သေးငယ်တဲ့ကျုံး, ထည့်ပါ။ ပိုကြီးတဲ့ရောသမမွှေများဖန်ဆင်းနိုင်ဒါ texture technique ကိုအဲဒါကိုအလုပ်လုပ်ရှေ့၌မှစတင်သည်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်လူတစ်ဦးမလိုအပ်ပါဘူးကတည်းကနှောင့်နှေး, ဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Lay-အပေါ်အဆင့်ချောမွေ့အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်တကထူကုတ်အင်္ကျီနှင့်အတူထည့်သွင်းထားသည်။ အင်္ကျီတစ်ပုံစံတည်းအဆိုပါအင်္ဂတေပေါ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပြီးတော့ပြန်ငှက်ကသူ့ထောင့်တတ်၏။ ဝေးသူထို့နောက်သူကတစ်ဦးကောင်းတဲ့ငှက်ပျောကွေးနဲ့ trowel ရရှိသွားတဲ့နှင့်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်အားလုံးဒေသများကူးဖို့သေချာပါအောင်, တစ်ဦးပုံရှစ်သို့မဟုတ် ess ပုံစံအတွက်မြို့ရိုးကိုကျော်ပါက run ဖို့စတင်သည်ထောင့်ကနေတည်းခို။ လိုအပ်လျှင်သူကသူ့ trowel မှအနည်းငယ်အပိုအင်္ဂတေထပ်ပြောသည်။ အဆိုပါခြုံငုံအကျိုးသက်ရောက်မှုမျက်နှာကျက်သို့မဟုတ်ရိုးမြေတပြင်လုံးကိုကျော်ဆေးသုတ်ကဲ့သို့အေိမျမြား၏အလွှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်သူသည်ပဲကွာလမ်းလျှောက်ကြောင့်လည်းဆို globs ထားခဲ့ပါနှင့်ထောင့်ချောမွေ့နှင့် linear ကိုကြည့်သေချာအောင်ဖို့မယူစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူသတ်မှတ်ထားကြကုန်အံ့နိုင်ပါတယ်။
နံရံတစ်ခုချောမွေ့နှင့် textured မျက်နှာကျက်ဖြစ်သည်ဆိုပါကပုံမှန်အားဖြင့်မြို့ရိုးအပထမဦးဆုံးအပြုမိသည်, ထို့နောက်ထိုအုတ်ရိုးအပြီးမျက်နှာကျက်ကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ အဲဒီအစား (မြို့ရိုးပေါ်မှာတင်ကြ၏သောအခါပြုမိခဲ့ကြပေသည်) ကိုမျက်နှာကျက် rebirding ၏, စင်ကြယ် trowel မြို့ရိုးအဆန့်ကျင်ကျင်းပလျက်ရှိသည်နှင့်၎င်း၏ထောင့် "တွင်ကဖြတ်" နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာထရံကိုရှင်းလင်းဖို့မျက်နှာကျက်တစ်လျှောက်တွင်ဖွင့်ထားသည်။ ဒီမျဉ်းထို့နောက်အကူးအပြောင်းချောမွေ့စွာစေရန်တစ်ဦး paintbrush နှင့်အတူပန်းခင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
(နည်းပညာပိုင်းတစ်ဦးကတော့ float ခေါ်) အဆိုပါရေမြှုပ်တစ်စက်ဝိုင်းသဏ္ဍာန်နှင့်အကြမ်းတမ်းမျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်။ ကဗဟို handhold အတူကျောထောက်နောက်ခံမှ fixed နှင့်အကြမ်းအားဖြင့်တစ်ဦးစံ trowel ၏အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်။ ရေမြှုပ်တစ်မူကွဲ texture technique ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အခနျးထဲမှာတစ်ခါတစ်ရံမျက်နှာကျက်နှင့်အပေါ်ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ရေမှိုတထွေးကို အသုံးပြု. သောအခါ, သဲရောနှောထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်နှင့် technique ကိုသဲ-ရေမြှုပ်ဟုခေါ်သည်။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မျက်စိထဲမှာသဲတစ်စပါးကိုရဖို့သိပ်ကိုမနှစ်မြို့ဖွယ်များနှင့်အန္တရာယ်ရှိသည်အဖြစ်စောင့်ရှောက်မှုကဤအကျင့်ကိုကျင့်သောအခါ, သငျ့ trowel အောက်မှာတိုက်ရိုက်ရပ်တည်ရန်မဟုတ်ခေါ်ဆောင်သွားရမည်, အရာအဖြစ်ကောင်းစွာထုံးများမှယားယံခြင်းဖြင့်ပိုဆိုးသည်။ ဤသည်ကိုပေါင်းစပ်အလွယ်တကူမျက်စိခြစ်ရာနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Lay-ပေါ်နှင့်ရောနှောပုံမှန်အစည်းအဝေး texture နှင့်ဝသကဲ့သို့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်တစ်ဦးယူနီဖောင်းများနှင့်ချောမွေ့အင်္ကျီကိုမျက်နှာကျက်ပေါ်မှာနေရာချစကာနှင့်အနားမှာရှိတဲ့ဖြတ်နေကြသည်ပြီးနောက်; တစ်လက်ကိုင်နဲ့အထူး rectangular ရေမြှုပ်ထပ်နှင့်မြို့ပတ်ရထားလှုပ်ရှားမှုအတွင်းမျက်နှာကျက်ကိုဖြတ်ပြီးပြေးနေသည်။ ဤသည်ကောင်းသောအမှုကိုပြုအချို့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အလေ့အကျင့်ကြာပါသည်။
ခြုံငုံကြည့်နှောင့်နှေးပုံမှန်အားအသုံးပြုပါသည်သော်လည်းစသည်တို့ကိုမျက်နှာကျက်အပေါ်တစ်ဦး fishscale အမျိုးအစားပုံစံ, ဗီရိုထရံရှိ၏ ကဖယ်ရှားပစ်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြလိမ့်မည်အတွင်း၌ခိုင်မာစေသောကြောင့်မည်သည့်အင်္ဂတေအဖြစ်ပြီးဆုံးသည့်အခါစောင့်ရှောက်မှုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အဆိုပါရေမြှုပ်ထွက် clean ခေါ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်သည်။
ခြေတံရှည်မကြာခဏအင်္ဂတေအရှိဆုံးမျက်နှာကျက်ရန်လိုအပ်သည်ကြောင့်ပုံမှန်အား-ပေါ်တွင်လဲလျောင်းနှင့်နံရံထက်အလုပ်လုပ်ရန်ခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်နေကြသည်။ တိုတိုမျက်နှာကျက်ဘို့တလည်းနို့သေတ္တာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဇောက်ထိုးအလုပ်လုပ်များ၏အခက်အခဲမကြာခဏကြမ်းပြင်, မြို့ရိုး, ကိုအောက်တွင်လူတွေအပေါ် splattering အင်္ဂတေဗုံးများတွင်ရလဒ်များ။
ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင် Accelerator အသုံးပြုချောမွေ့မျက်နှာကျက်, နံရံမတိုင်မီပြုနေသည်။ အခါစိုစွတ်နှောင့်နှေးအင်္ဂတေကိုအလွယ်တကူချောမွေ့အင်္ဂတေအုတ်ရိုးနားမှာချွတ်ခြစ်နိုင်ပါသည်။ ချောမွေ့တဲ့မျက်နှာကျက်ကနေမဆို splatters အလွယ်တကူရှင်းလင်းသော blueboard သော်လည်းမအနေနဲ့ပြီးသားအသစ်မွမ်းမံမြို့ရိုးမှပယ်ခြစ်နိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ trowel သို့မဟုတ်အခြားအင်္ဂတေအောက်မှာရပ်နေသည့်အခါစောင့်ရှောက်မှုယူရမည်ဖြစ်သည်။
ချောမွေ့တဲ့မျက်နှာကျက်အလုပ်လုပ်၏အထွေထွေအခက်အခဲမြင့်မားကုန်ကျစရိတ်ဆွဲယူ။ အဆိုပါ technique ကိုချောမွေ့သောမြို့ရိုးပေမယ့်အင်္ဂတေများအတွက်အဆင်မပြေထောင့်မှာအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။